Sony wuxuu tusi lahaa Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus iyo XZ1s inta lagu jiray MWC 2018 | Androidsis
Sony wuxuu tusi lahaa Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus iyo XZ1s inta lagu jiray MWC 2018
In kasta oo Sony ay soo bandhigi doonto inta lagu gudajiro Waxaaad 2018 - dhacdada berri ka bilaabmeysa Las Vegas - waxaa jira warar xan ah oo xoog leh oo sheegaya in shirkaddu aysan soo bandhigi doonin qalabkeeda calanka, waxay u muuqataa in shirkaddu ay bilaabi doonto hubkeeda heerka sare inta lagu jiro MWC 2018 kaasoo dhaca bisha Febraayo.
Wax walba waxay muujinayaan in inta lagu jiro CES 2018 shirkaddu ay muujin doonto oo keliya aaladaha ay gasho sida Xperia XA2, XZ2 Ultra iyo L2. Markaa Xperia Z1 Premium, XZ1 Plus iyo Z1S Waxay socon doonaan ilaa Shirka Caalamiga ah ee Moobaylka (MWC) 2018 ee ka dhici doona magaalada Barcelona bisha soo socota.
Waxyaabaha suuragalka ah ee Xperia XZ1 Premium
Sida ku cad macluumaadka ilaa hadda la helay, Xperia Z1 Premium waa taleefanka soo socda ee shirkadda soo socda. Waxay yeelan doontaa a Shaashad 5.46-inji ah oo xallinkeedu yahay 2160 x 3840 pixels iyo teknolojiyada HDR LCD. Waxaa ku shaqeyn doona a Processor Snapdragon 845 oo ay la socdaan 6 GB oo RAM ah iyo 128 keyd gudaha ah.
Sony had iyo jeer wuxuu ku taaganyahay qaybta sawirka waxaana markan ku darayaa saddex muraayadaha indhaha, laba 12 megapixels xaga dambe ah iyo mid 13 megapixel ah oo sawirada la iska qaado. Waxaa la filayaa in, sida taxanaha Xperia XA2, moobiilkan uu ku yeelan doono iskaanka sawir-qaadaha dhabarka.
Waxaa lagu xantaa in Xperia XZ1 Plus iyo XZ1s ay ku yeelan doonaan sawirka iskaanka isla goobtaas iyo isku mid ah kaamirooyinka, in kasta oo xaalada XZ1s ay lahaan doonto shaashad weyn oo 5.2-inji ah oo leh xallin hoose (920 x 1080 pixels) marka lagu daro qaadista processor dhexdhexaad ah, gaar ahaan Snapdragon 835.
Dhinaca XZ1 Plus, shaashaddaHalkaas waxay noqon doontaa 5.5 inji waxaana ku shaqeyn doona processor Snapdragon 845. Labada telefoonba waxay lahaan doonaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah. Weli lama xusin Xperia XZ2, taleefan yeelan lahaa shaashad la’aan.
Ugu dambeyntiina, waa in la xusuusnaado in waxaas oo dhami ay yihiin kutiri-kuteen iyo inaynu sugno inta ay shirkaddu fulinayso dhacdadeeda si ay u hesho macluumaad rasmi ah oo ku saabsan taleefannadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » Sony wuxuu tusi lahaa Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus iyo XZ1s inta lagu jiray MWC 2018
Doogee V waa Frankenstein oo ka soo jeeda hore ee iPhone X iyo Galaxy S9 oo daatay
Ciyaaraha dagaalka ee ugu wanaagsan Android